China Yakanaka Dhizaini Bindu Rekushandisa Shandisa PC Greenhouse fekitori uye vagadziri | Bonai
Akanaka Dhizaini Gindu repamba Shandisa PC Greenhouse
1. Pindura mibvunzo yako online maawa makumi maviri nemana panguva ipfupi inogoneka
2. Vashandi vane ruzivo kuti vapindure mibvunzo yako yese
1. Isu tinokuzivisa iwe nezve chaiwo masendimita uye mavara iwe aunoda.
2. Tinogona kuburitsa polycarbonate board, uye isu takagadzirira kukupa iwe mamwe mazano eruzivo rwako.
Q: Ndingawana sei muenzaniso?
A: Kana zviri zvemahara sampuli, iwe unongofanirwa kubhadhara kune kwavo kuendesa.
Mubvunzo: Ndeapi mazwi ekubhadhara aunogona kugamuchira?
A: Tinogona kugamuchira waya kuchinjisa, tsamba dzechikwereti, uye Western Union.
(1) Moto-unodzora: Iyo yenyika yakajairwa GB50222-95 inosimbisa kuti iyo PC bhodhi iri murazvo-unodzora giredhi rekutanga, kureva, giredhi B1. Iko kuvesa kwePC bhodhi iri 580 degrees Celsius, uye ichazvidzimisa yega mushure mekusiya moto. Haizogadzi gasi ine chepfu panguva yemoto uye haikurudzire kupararira kwemoto.
(2) Kuchinja-chinja: Kukombama kunotonhora kunogona kushandiswa panzvimbo yekuvaka maererano nedhizaini dhizaini, uye inogona kuiswa mune Arch, semi-circular padenga uye hwindo. Iyo shoma yekukotamisa nharaunda ndeye 175 nguva kukora kweiyo yakagamuchirwa ndiro, uye kupisa kukotama zvakare kunogoneka.
(3) Ruzha kuputira: PC bhodhi ine yakajeka kurira kuputira maitiro, uye ine zvirinani kurira kuputira kupfuura girazi uye acrylic bhodhi rakaenzana ukobvu. Pasi pehupamhi hwakafanana, kuputira kwezwi kwePC bhodhi iri 3-4DB yakakwira kupfuura yegirazi. Pakati penyika, inyaya yesarudzo yemigwagwa yemigwagwa.
(4) Kuchengetedza magetsi: ramba uchitonhorera muzhizha uye gara uchidziya munguva yechando. PC bhodhi ine yakaderera thermal conductivity (K kukosha) kupfuura yakajairwa girazi uye mamwe mapurasitiki, uye kwayo kupisa kuputira mhedzisiro ndeye 7% -25% yakakwira kupfuura iyo yegirazi rimwe chete. Iko kupisa kunosvika kusvika 49%. Nekudaro, kurasikirwa kwekupisa kwakadzikira kwazvo, uye kunoshandiswa muzvivakwa zvine midziyo yekupisa uye inyowani yezvinhu zvakatipoteredza.
(5) Tembiricha inochinjika: PC bhodhi haizove inotonhorera brittle pa -100 ℃, uye haizo nyoroveswe pa 135 ℃, uye ma mechanics uye zvemagetsi zvivakwa hazvizo shanduke zvakanyanya munzvimbo dzakashata.
Pashure: Yakasarudzika Fekitori Yakakwira Yakakwira Mhando Polycarbonate PC Sheet
Zvadaro: Polycarbonate Plastiki / Hollow Sheet Zvivakwa Zvekuvakisa